PC တစ်လုံးလျှင်မြန်ဖို့ရာ TweakNow PowerPack 2012 ကိုသုံးပေးပါ
Posted by ညီနေမင်း on 8:49 AM with 36 comments
မေး ထိုက်ကိုးကိုနေမင်းခင်ဗျာ ကျွန်တော့်စက်ထဲမှာ ဖွင့်လို့မရတဲ့ ဖိုင်နာမည်တွေနဲ့အများကြီးပဲ virus လည်းမဟုတ်ဘူး။ ခုများများလာလို့ စက်ကနည်းနည်းလေးချင်နေပြီ။ ကျွန်တော် software တွေကိုလည်း ခဏခဏဖြုတ်လိုက် ပြန်ထည့်လိုက်နဲ့ လုပ်နေတာနဲ့လည်း ဆိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ cleaning လုပ်တဲ့ software လေးတစ်ခုလောက် ကူညီပါဦး။ ကောင်းကောင်းလေးနော်။
ဖြေး ဒီနေ့အထိ ကျွန်တော့်လက်စွဲသုံးနေတဲ့ software ပါပဲ. သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အတွက် အလွန်မြန်တဲ့အပြင် မလိုတာ မှန်သမျှကို ခဏတာအတွင်း ရှာဖွေပေးနိုင်ပါတယ်။ ဖျက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ မိမိကွန်ပျူတာ တကယ်မြန်ဆန်စေပါလိမ့်မယ်။ တင်ပြီးစမ်းလိုက်ပါ။ မလိုအပ်တာတွေကိုတော့ တစ်ခုချင်းစီ လိုက်ရှာပြီး ဖျက်ပေးဖို့လိုပါတယ်. ကဲလိုအပ်ရင် အောက်မှာ Download လုပ်ပေးပါ။ တကယ့်ကို မရှိမဖြစ် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ application software တစ်ခုပါ။
sate1zaJuly 14, 2012 at 9:44 AMcANT DOWNLoaD PYAR,,,.....ReplyDeleteWin KoJuly 14, 2012 at 2:08 PMcan't open.. asking for password..ReplyDeletesai sann ooJuly 14, 2012 at 7:04 PMgive password please.ReplyDeleteကျူရိုးJuly 14, 2012 at 8:36 PM(အကိုတို့ေ၇ password က konyinaymin@gmail.com ပဲလေဗျာ။)ကိုညီေ၇ အကိုပြောသလို ဒေါင်းလိုက်တာ အိုကေတယ်ဗျာ အဲကောင်တင်ပြီးအရှုပ်တွေ၇ှင်းလိုက်အုံးမယ်။ဟို..ဖုန်းနဲ့ ပက်သက်တဲ့ကောင်တွေပြောတာကိုအကို စိတ်ထဲထားမနေပါနဲ့ဗျာ...ဒီလိုပါပဲ...အပင်မြင့်၇င်လေတိုက်ခံ၇တယ်ဆိုလားမနာလိုလို့ပြောတာနေမှာ အကို။ReplyDeletehighJuly 14, 2012 at 10:08 PMcan't downloadReplyDeleteDSPJuly 16, 2012 at 11:52 AMpassword!!!!!!!!!တောင်းနေပါတယ်။ReplyDeletetuntunJuly 16, 2012 at 1:24 PMဟာဗျာ Password က konyinaymin@gmail.comအပေါ်မှာရေးထားတယ်လေဗျာကုန်အောင်ဖတ်ပေးလေသူခမြာ တင်လဲတင်ပေးရတယ်အကုန်လဲမဖတ်ဘူးReplyDeletekakashiJuly 16, 2012 at 1:41 PMFile Type သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ..ReplyDeleteAung Kyaw ZawJuly 16, 2012 at 4:59 PMဘရို ရေ..rar ဖိုင်ကြီးက password တောင်နေပါတယ်..တစ်ဆိတ်လောက် passowrd မှတ်မိရင် ပြန်ပြောပြပေးပါလားဗျာ..ReplyDeleteyekyawhanJuly 17, 2012 at 1:40 AMပါတ်စဝေါ့တောင်းနေတာကိုအထာကိုင်နေတယ်ဗျို့.....:)ReplyDeleteyekyawhanJuly 17, 2012 at 1:42 AMpassword တောင်းတာကိုအထာကိုင်နေတယ်ဗျို့....... :)ReplyDeletephone winJuly 21, 2012 at 10:14 PMကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ---။ReplyDeletezawlayJuly 23, 2012 at 10:12 AMpassword က password ပဲပေ့ါဗျာ :)ReplyDeletePyaytharJuly 23, 2012 at 5:39 PMကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒေါင်းသွားပါတယ် မြန်မာစာမတတ်သူများ မြန်မာစာဖတ်တတ်အောင် အရင်သင်လိုက်ကြပါအုံး ကိုညီနေမင်းရဲ့ .rar ဖိုင်တွေမှန်သမျှ Password က konyinaymin@gmail.com ပါလို့ ပြောတဲ့လူကပြောတာတောင် ပြန်မေးနေကြသေးတယ်။အထာကိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့လူကလည်းရှိသေး။ရီရတယ်လူတွေ...ReplyDeleteandrew htunJuly 23, 2012 at 8:58 PMHow to used brother? Please answer for me! Thank U bro.ReplyDeleteNotearJuly 24, 2012 at 4:12 PMသာဓု သာဓု သာဓု ပါ ကို ညီနေမင်း ။။ ကိုလုပ်နိုင်တဲ့ ဘက်က မြန်မာပြည်သူတွေကို ကူညီတာကောင်တဲ့အလုပ်ပါဗျာ။။။ReplyDeleteမောင်မောင်ထိုက်July 25, 2012 at 12:53 AMကိုညီနေမင်းတနားပါဒယ်အဟီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးချေတနာကို ဘုမတိဘမတိတဲ့ ကောင်တွေpasswordပါဆိုမှpassword ပေါ့ ကွဒါတောင်မတိ၇င်မင်းတို့ အားလုံးနာ့ ဆီလာခဲ့ မင်းတို့ ကွန်ပြူတာမကိုင်နဲ့ တော့ ကမ္ဘာငတုံးကြီးများအသင်းဥက္ကဌလုပ်ဖို့တစ်ယောက်ကိုလျှောက်လွှာတစ်စောင်ပေးမယ်ReplyDeleteBrang San AwngJuly 25, 2012 at 6:24 AMwowww that's working... itsagreat post... thanks alot of much ko nyi...ReplyDeleteminJuly 26, 2012 at 9:56 PMအကိုရေ ကျေးဇူးပါ ..ဖြစ်နိူင်ရင်အသုံးပြုနည်းလေးတင်ပေးပါလား function တွေကများတော့ စမ်းတ၀ါးဝါးရှောက်နှိပ်နေရလို့ပါ...ReplyDeletedouble zawJuly 28, 2012 at 1:04 PMserial no: lo nay par talReplyDeletekt2@dalJuly 30, 2012 at 11:29 AMThanks for everything ..keep going.I'll follow u! ^_^Serial # PHFE-SEJF-7D53-FSNH-4SGHReplyDeleteMin ThihaAugust 1, 2012 at 10:52 PMကျေးဇူးအရမ်းကို တင်ပါတယ် ကိုညီနေမင်းရေ...ကျွန်နော်က ကိုညီနေမင်းရဲ့ online တပည့်တယောက်ပါ..မသိတာတွေ သိချင်ရင် ကိုညီနေမင်း ဆိုက်ကိုဖွင်ကြည့်လိုက်တာပဲ...ReplyDeleteကိုသန့်ဇင်August 5, 2012 at 11:33 PMအဖြုရောင်ပဲပေါ်နေတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ rar လဲမဟုတ် hisprit လဲမဟုတ် ဘာ အမျိုးအစားလဲသိချင်တယ်ဗျာ.........ReplyDeleteKyaw Thet AungAugust 6, 2012 at 2:59 AMကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကိုညီနေမင်း .. ဒေါင်းသွားပါတယ်.. တတ်နိုင်သလောက် ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ (ဒီကဒေါင်းတဲ့ rar ဖိုင်တွေအားလုံးရဲ့ password က konyinaymin@gmail.com ပါ) လို့ ၀ိုင်းရှင်းပြပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ....ReplyDeleteKyaw Thet AungAugust 6, 2012 at 3:15 AMကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ဒေါင်းပြီးလို့ သုံးရတာလဲ အဆင်ပြေပါတယ်.. တတ်နိုင်သလောက် ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့ အနေန့ (ဒီကဒေါင်းတဲ့ rar ဖိုင်တွေ အားလုံးရဲ့ password က konyinaymin@gmail.com ဖြစ်ပါတယ်) လို့ ၀ိုင်းရှင်းပြခဲ့ပေးပါတယ်..ReplyDeleteKyaw Thet AungAugust 6, 2012 at 3:19 AMကျေးဇူးတင်ပါတယ်...ReplyDeleteutinyi hinthadaAugust 6, 2012 at 10:28 PMကျွန်တော်ကအသက် ၅၂ နှစ်ပြည့်ပြီးသွားပြီ.အချိန်ပိုလေးတွေရလာလို့Internet ကိုစသုံးဖြစ်တာ.ကိုညီနေမင်းနဲ့ တွေ့ ရတော့မှအဆင်ပြေသွားတယ်.မသိတာတွေသိရပါတယ်.မြန်မာလိုတင်ပြပေးတော့ပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်.ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်..ReplyDeleteutinyi hinthadaAugust 6, 2012 at 11:53 PMကျွန်တော်က.၅၂ နှစ်ပြည့်ပြီးပြီ..အချိန်ပိုလေးတွေရလာလို့ .internet ကိုစသုံ့းဖြစ်တာပါ.ကိုညီနေမင်းနဲ့ တွေ့ ရတာအတော်အဆင်ပြေသွားတယ်..သိချင်တာတော်တော်သိရပြီ.မြန်မာလိုတင်ပြလို့ ပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်.ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်.ကိုညီနေမင်းကကျွန်တော့်ရဲ့ .သင်ဆရာ.မြင်ဆရာ.တစ်ဦးပါ...ReplyDeleteutinyi hinthadaAugust 7, 2012 at 12:01 AMကျွန်တော်က ၅၂ နှစ်ပြည့်ပြီးပြီ.အချိန်ပိုလေးရလာလို့ .၀ါသနာပါတဲ့ Internet ကိုစသုံးဖြစ်တာပါ.ကိုညီနေမင်းနဲ့ တွေ့ တော့မှအဆင်ပြေသွားတယ်..သိချင်တာတွေသိရပြီ.မြန်မာလိုတင်ပြပေးထားလို့ ပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်.ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်.....ReplyDeleteKingpeterAugust 7, 2012 at 8:53 AMSoftware # http://www.mediafire.com/?wuvwg18k47dgaql Serial # PHFE-SEJF-7D53-FSNH-4SGHReplyDeletefeasant fancylikeAugust 10, 2012 at 3:23 AMကျေးဇူးတင် ပ.....ကိုညီနေမင်းရယ်.......ReplyDeletefeasant fancylikeAugust 10, 2012 at 3:29 AMကျေးဇူးတင် ပ.....ကိုညီနေမင်းရယ်.......ReplyDeleteThein NaingAugust 13, 2012 at 11:20 AMအကိုရေဆော့ဝဲလားpdfဖိုင်လား ဖွင့်လိုမရဘူးဖြစ်နေတယ်ကူညီပါအုံးReplyDeleteNyinyi naingSeptember 15, 2012 at 1:05 AMsayar nay min bae loe thone ya mar lae pleaseReplyDeletepeonyMay 23, 2013 at 12:18 PMdown လို့မရဘူး...လုပ်ပါဥိးReplyDeleteminn khantJune 26, 2013 at 1:00 AMကိုညီနေမင်း လင့်၃ခုလုံး ဒေါင်းလို့ မရတော့ဘူး..ReplyDeleteAdd commentLoad more...